के SEO र सामाजिक सञ्जाल जोडिएको छ?
सोशल मिडियाको प्रभाव र यो खोज इञ्जिन अनुकूलन को दायरे मा फैलिएको तरिका शायद सबै भन्दा विवादित प्रश्नहरु मध्ये एक हो।. मेरो मतलब यो रहस्यहरू: कसरी सामाजिक सञ्जाल एसईओमा असर गर्छ? के यी दुई अवधारणाहरू सिर्जनशीलतामा अभिनय गर्दै छन्, सबै होइन, वा यो पनि केही गर्न सक्दैन?
यहाँ एक स्पोलर आउछ - छोटो जवाफ हो हाँ, यो गर्छ. तर दोस्रो, अधिक विस्तृत र व्यापक व्याख्या विचार गर्न यो अधिक सही हुनेछ. चलो यो सामना - सोशल मिडिया निश्चित रूप देखि एसईओ तिर एक सम्बन्ध छ, तर यो सबै पछि आपसी हुन सक्छ? दुर्भाग्यवश, मलाई केवल एक सानो कुरा निश्चित छ - सामाजिक सञ्जाल छैन, कम से कम सकारात्मक, एसईओ मा प्रभाव. यो केवल खोजी अप्टिमाइजेसनलाई सहयोग गर्दैन जसको अधिकांश मानिसहरू यो विश्वास गर्दछ.
तल मेरो आफ्नै सुझाव संयोजन गर्न जाँदैछु केहि मूल्यवान अंतर्दृष्टि संग Google को सदस्य सदस्यहरु द्वारा प्रदान गरिएको. सर्वप्रथम, चलो यसलाई दिइएको छ - विश्वको खोजी उद्योग विशालले प्रत्यक्ष डायरेक्ट्री कारकका लागि सोशल मिडियाको लागि कुनै पुष्टिकरण गरेको छैन।. मेरा मतलब हो, हो, सोशल मिडिया अझै सामग्रीको लागि अनलाइन दृश्यता प्राप्त गर्न पूर्ण तरिकाले उचित तरिकामा छ. र हाँ, अन्तमा, यो एसईओ को बारे मा सबै छ. हामी सोसाइटीले SEO कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने बारे निश्चित गर्न के गर्न सक्छौं? कुन सही जवाफ सम्भवतः सम्भव हुन सक्छ, यो स्पष्ट छ कि सोशल मिडियाले वास्तवमा तपाईंको खोजी इन्जिन अनुकूलनलाई सम्पूर्ण काम गर्न मद्दत गर्दछ।. तर म अझै पनि सोचिरहेको छु, खोज विशालले कहिलेकाहीं यसको हालको श्रेणी एल्गोरिदममा थप सामाजिक संकेत ल्याउनेछ?
समयको लागी, Google खोज एल्गोरिदमहरू कहिल्यै खुलासा गरेनन्. यसैले Google को खोजी बटहरूको व्यवहारका ढाँचाहरू बुझ्न एकमात्र तरिका वास्तविक जीवन परीक्षणमा हरेक सम्भावित परिणाम जाँच गर्दैछ।. के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी यो समय-उपभोग गर्ने र श्रम-गहन यी अनुसन्धान कार्यहरू हुन सक्छ? ठीक छ, आउनुहोस् हामीलाई बिन्दुमा फर्कनुहोस्. एसएसओले कस्तो असर पार्छ? हामी पनि केहि पनि लागि सोशल मिडिया लिन सक्दछौं, तर रैंकिंगमा सिधा कारक होइन, Google को अधिकारका अनुसार. यद्यपि, यो पनि, यसको मतलब छैन कि सोशल मिडिया सबैलाई रैंकिंग मा कुनै प्रभाव छैन, किनकी यो गुगल द्वारा पुनः पुष्टि भएको थियो कि सोशल मिडिया आफैले एक रैंकिंग कारक को लागि खडा गर्दैन.
मलाई विश्वास छ कि कम या कम सही जवाफ शब्द "सम्बन्ध" को बारेमा देख्न सकिन्छ।. "अर्थात् यो पद उल्लेख भएको सन्दर्भको सन्दर्भमा सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ। रैंकिंग कारकहरु व्हाइट पेपर 2016 मा खोजमेन्ट्स द्वारा वितरित. मलाई यकीन छ कि मान्छे वास्तव मा सही पथ चल रहे हो. यसरी, सोशल मिडियाले एसईओ कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने मात्र जवाफ दिन्छ - हो, यसले गर्छ. तर त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ कुनै प्रत्यक्ष वा डबल-अनुक्रम सम्बन्धहरू छैनन्. त्यसोभए, सोशल मिडियाको विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर पदोन्नति गर्नको लागी अनुहार राख्नु अझै राम्रो तरिकाले गठन गरिएको निर्णय हो. एकै समयमा, खोजी ईञ्जिन अनुकूलन तपाईंको सटीक प्रयास र समयको आफ्नै आवश्यकता पर्दछ Source .